Maxaad ugu baahan tahay maqal ah editor tag for? Haddii aad tahay qof lover music ah, aad u badan tahay qadar wanaagsan ee files music kaydsan aad PC ama Mac. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad guraan files music si maadaama ay qaadan kartaa muddo ah si aad u dooratid playlist markaas ama si aad u hesho song aad u baahan tahay. Plus, una aad music wada kaliya ka dhigi kara eegi badan oo dhan meeldhexaadka ah iyo xitaa waad dhagaysan karaa, in la yidhaahdo music Pop mar ama dhagaxa music haddii aad tahay niyadda kale.
Tag tifaftirayaasha Audio waa weyn oo darajo ururinta music aad. Qaar ka mid ah waa software standalone iyo qaar ka mid ah waa dar-on ciyaartoyda music, laakiin walba kartid shaqada aad u. Haddii aad tahay files ayaa tagging fiican, raadinta noqon doonaa wax ku ool ah oo degdeg ah. Halkan waxa ku jira ugu fiican tifaftirayaasha tag maqal ah oo loogu Windows, Mac, Linux iyo.
1. Best audio tag editor for Windows
Halkan waxa aad ku arki mid ka mid ah ugu wanaagsan ee tifaftirayaasha tag maqal ah oo loogu Windows.
TagScanner horumarsan by horumarinta X. Waa barnaamij multifunction ee maaraynta iyo abaabulka ururinta music ah. Barnaamijyada u ogolaanaya tafatirka tag oo ka mid ah oo dhan qaabab audio ka, ka bedelayaan faylasha sida ay tags, guud ahaan macluumaadka tag ka filenames audio iyo badalo qoraalka ah tags iyo filenames. Waxaa la og yahay in ay isticmaalaan database online sida Freedb, Amazon, iyo Discogs. Waxa kale oo ay taageertaa ID3v 1 / v2, APEv2, vorbis Comments, wmv, iyo MP4 tags. Waxaad sidoo kale ay abuuri karaan oo playlist dhoofinta oo ah qaab HTML ama Excel. Waa lacag la'aan ah si ay u soo bixi oo joogto ah updates si joogto ah la sii daayay.
Features in aad u jeclaan doonaa
- Taageerada oo dhan versions ID3, v1 daanyeer iyo tags v2, WMA tags, Vorbis Comments iyo MP4
- taageera gundhig lyrics oo ku daboolaan tahay.
- macluumaad dhoofinta qaabab sida HTML, XML, iyo CSV.
- Waxa ay taageertaa Multilanguage interface
- Waa barnaamij standalone u computer user ee - muuqaalada ka mid ah, tags aasaasiga ah, la dheereeyey tags, bedelayaan, oo tag processing. Waxaa intaa dheer, in aad tags ku eegaan karo oo ka database sida Freedb dabooli fanka ka hor inta aadan iyaga ku badbaadin. - Waa freeware xadidaad ah. - Taageerada oo dhan qaabab waaweyn sida mp3, mp4, wma, daanyeer, MPC, AAC, FLAC, spx, OFR, tta, iyo WV.
- Its interface waa unintuitive iyo qaadataa waqti yar si aad u hesho laalaadaan ah. - Sida fursadaha yihiin hormartay, ay qaadato talooyin badan oo aad ka filan. - Ma jirto version la qaadi karo ee software-ka.
2. Best audio tag editor u Mac OS
editor tag music
music editor tag caawimo aad xaalkaa macluumaad tags si fudud oo wax ku ool ah. Waxaad edit Dufcaddii, magaca karaa metadata iyo Deji text qarsoon ee tag music. Sidoo kale Software dayactirka codes aaddanayn ama u kharribmay. Waxa ay taageertaa qaabab sida MP3, M4A, Mp4, ID3 for files FLAC.
- Waxa ay taageertaa ID3 versions, iyo Lugood tags oo ay ku jiraan, horyaal, album, copyright, sifayn, lyrics, iwm Tani badbaadiyey macluumaadka laga heli doonaa idiin on aaladaha kale ee Apple.
- Waxa ay taageertaa processing Dufcaddii Halkan ka badan ee files music la marsiiyey karo .
- bedelayaan Dufcaddii kuu ogolaanayaa inaad la badalo magaca ka metadata.
- Change ama badalo Deji text tag iyo sidoo kale tags kharribeen dayactiro.
- Iyada oo barnaamijkan, waxaad ka raadin kartaa lyrics la fursadaha raadinta sida LyricsWiki, AZlyrics, MetroLyrics, DarkLyrics oo badan dheeraad ah.
- Waa hagaag dhexgeliyey Lugood.
-. Waxay leedahay user-friendly interface weyn, kuwaas oo isku beeraha oo dhan loo baahan yahay si wax ku ool
- Waxa kale oo uu leeyahay hab shaashad buuxda.
- Magaca iyo hawlaha kale waxaa laga heli karaa bar qalab.
- Waxaa la dhexgeliyey Lugood iyo tags qalabka kale synchronizes user isku mid ah.
- Taageerada oo dhan qaabab ka ciyaaray by Lugood ah.
- Waxa aan ka software keliya ku taagan tihiin, haddii aadan muusiko ku Lugood.
- Ma jiro version la qaadi karo ee software this.
- Inta badan wareer sabab u faahfaahsan badan oo horumarsan ee hal suuqa kala kaliya.
3. Best Audio editor tag , waayo, Linux
Kid3 audio editor tag software multiplatform oo dhan tags tafatirka taageertaa. Iyadoo software, kuwaas oo aad tags isticmaalaya filenames iyo qeybsanaan ku xigeenka abuuri karaan. Waxa kale oo aad tags ka database online, oo ay ku jiraan gnudb.rog, Discogs iyo qaar badan oo dajiyaan karaa. Codsiga waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad jiidi oo hoos u tahay dabool. Waxayna raadiyeen fanka iyo lyrics sidoo kale waa u fududahay. Qaababka kale waxaa ka mid diinta ka dhexeeya ID3v1.1, ID3v1.1 iyo ID3v2.4 tags.
-. itusi tag qaabab sida MP3, ogg / vorbis, DSF, FLAC, MPC, Opus, Speex, WMA, regelingen, AIFF iyo tracker modules
- tags u content iyo filenames Guud
- Taliyaha Guud ee files playlist
- Si toos ah u baddalaya kiiska hoose iyo kiiska sare iyo bedelo xadhig leh.
- tags qaabab file sida CSV, HTML, XML, iyo playlists dhoofinta.
- Waxaad qalabayn karto hawsha la isticmaalayo interface line amarka, taas oo faa'iido ah Linux.
- Waa wax soo saarka taagan oo keliya ah.
- oo dhan tags itusi, oo iyaga dhalin ilo sida faylasha, database iwm
- source Open freeware updates halkan ka cusub yihiin si joogto ah la heli karo.
- Ma jiro version la qaadi karo ee software.
- Taageerada dhufto badan Linux , Mac OS, iyo Windows.
- Waxa aanu lahayn aragti maqaalkiisa files kala duwan, taas oo ah cillad weyn.
- Haddii aad rabto inaad isticmaasho sifaatka aad u sareeya, caawimaad yar ay buugagan online u baahan yihiin.
- U baahan aqoon line amarka si toos ah hawlaha.
Dhammaan software kuwaas oo kaa caawin kara inaad u qabtaan waxyaabaha aasaasiga ah iyo shaqo horumarsan ugu idiin. Waxaa fudud in la isticmaalo waana in aad ka heli dhib, waxaa had iyo jeer ay buuga online si aad u fiican u isticmaalno. Waxa ka muhiimsan, ha ka welwelina darajo aad music wax ka badan ama ka saacadood ah kharashka isku dayaya in ay helaan xaq playlist ah. Hadda, waxaad ogaan doontaan oo music kaliya in lagu daro in aad playlist oo aan qaadan lahaa waqti badan!
[Xalin]: Sida lagu Helo Deezer Premium u Free
> Resource > Music > The Tag Software Editor Best Audio Wixii Windows / OSX / Linux